Usuku My Pet » 7 Imibono Totally Unique For A Usuku
Igcine ukubuyekezwa: Oct. 20 2020 | 3 imiz ufunde
Dating, sonke sabhekana ezinye dates emihle, abanye sesifiphele / ones dreary, abanye cringe awful abafanelekayo futhi ngethemba ezinye fantastic / ones okuthakazelisayo too. Ngakho lokho okwenza usuku amazing? Yebo umuntu usuke umhlangano unomsebenzi omningi okufanele awenze nalo, Nokho ngicabanga kukhona nokwengeziwe kunalokho. Ngicabanga into ngempela ukwenza usuku bahluke the ehlanganyelwe isipiliyoni unayo ndawonye, futhi uxhumano lokhu kuletha.
Ukuhlangana a bar noma pub for a date wokuqala uwukuthi kakhulu ujabule futhi ngenkathi edla limnandi, kungaba isidina uthole sinini njalo ngesonto ukuze date ebusuku nomngane wakho womshado. Kungakhathaliseki ukuthi usuku lokuqala noma a laqobe veke 'usuku ebusuku' Spice it up by ngempela ukuphuma ukwenza okuthile fun and izandla phezu.
Ingabe bewazi ukuthi wabaxoxela okuhlangenwe nakho ukudala ukuhlobana phakathi kwabantu? Isebenza like lokhu. Uma unazo uhlobo nakho uyobe futhi nemizwelo ukuthi bahambisane nalo. Ngakho isibonelo uma abseil off eweni cisho ukuzwa ezinye ukwethuka, mhlawumbe terror, adrenaline and a high. Manje lapho sinawo nakho ehlanganyelwe nomunye umuntu, futhi siyaphi ngokusebenzisa imizwelo efanayo ndawonye, lokhu kwakha isibopho. Phakathi kokunye singakwazi ahlobana futhi abe nokuthile ongaxoxa ngakho, Nokho nabesifazane kunesizathu obuphathekayo. Uma abesifazane baye a ehlanganyelwe (okuhle noma okuthakazelisayo) Okuhlangenwe nakho nomuntu a zamakhemikhali ezibizwa ngokuthi Oxytocin empeleni Ufika ezikhishwe emizimbeni yethu. Lona hormone Ubuhlobo obuseduze futhi kuyosenza sizizwe closer kuze umuntu sisaba yisenzakalo. Manje umbhangqwana nge adrenaline ezinye ngokwenza okuthile okuthakazelisayo, futhi abanye endorphins kanye serotonin ngokwenza into fun, futhi kungcono mix pretty heady. Uma ubuka ngale ndlela kulula ukubona indlela esingazuza awe umuntu thina uphola.
Ngakho singasisebenzisa kanjani lokhu nomqondo dating? Easy, ufuna ukuhlela izinsuku ukudala ukuthi isipiliyoni okwabelwana futhi zihlanganisa a fun and element ethokozisayo. Izindaba ezinhle ukuthi kungokwemvelo, Abantu kwansuku abangasithandi kukhombisa look-alikes usengakwazi ukwakha lezi uhlobo nakho. Futhi lokhu kukunika onqenqemeni phezu izimbangi zakho. Enamandla futhi ekhangayo kanjani ukwazi ukudala lolu hlobo of isipiliyoni, futhi yeka indlela omkhulu iba namandla ukukhangana. Uma sizizwa imizwelo kwakhulisa kanye ekuzihlanganiseni nomunye umuntu sizizwa kubo.
The enye inzuzo yokukhetha into eyingqayizivele kanye fun for usuku lwakho wukuthi ngeke aphule ice, okuyinto ebaluleke kakhulu uma usuku lokuqala. Uma nisebenzela kanjani ukuba apheke pizza ndawonye ungenayo isikhathi esiningi for uzizwe. Futhi kungaba ukuvumela amathuba ukuthola ngokomzimba futhi flirty omunye nomunye. It ngokuvamile kanzima athinte umuntu wena kahle uma ngosuku in a bar, Nokho uma nenza into esiwusizo ndawonye ke kulula kakhulu. Uma une ukusebenza ndawonye umsebenzi ongcono ngisho, khumbula ukuthi isipiliyoni okwabelwana kudala uxhumano. Futhi uma umsebenzi wakho kuyajabulisa futhi uthola yourselves laughing lokhu kuzokusiza kokubili ukuba uphumule.
Amasu wena Nazi:
Ukupheka ndawonye - Ukupheka ndawonye kungaba kumnandi. Ungakhetha ukubhuka isifundo ukupheka noma ukupheka okuthile ekhaya (abazazisayo akusiwona usuku lokuqala).
Zobumba - Again lena izandla kukho bese kungaba kakhulu sexy. Cabanga ifilimu 'Ghost'. Futhi ingxenye enkulu wukuthi kuyoba keepsake kusukela osukwini ngesimo whatever you wenza. Just qinisekisa usuku lwakho uyazi ukugqoka izingubo ezindala.
A ukuhamba izwe amadlingozi - Saxoxa nangokwehlukana nokwakha nakho ehlanganyelwe futhi uma ungenalo isikhathi esiningi noma wena imali ukuhambahamba ndawonye kungaba ekahle. Abantu bavame ukukuthola kulula ukukhuluma uphumule futhi lapho bahambamba. Futhi uma ukhetha endaweni ethile ukuthi unakho izwe nice lokhu banganezela isipiliyoni. Omunye izinsuku best engake ngaba kwaba ukukha amakhowe asendle ehlathini. Ngenhlanhla le ndoda ngineminyaka dating wayazi yibaphi ezidliwayo!
Something kwakwakhiwa like abseiling noma zorbing - Ukuze adrenaline junkies lokhu uphelele. Just qinisekisa usuku lwakho uyakwazi uhlela futhi up for it ngaphambi uya!
Iya zoo - Anything nezilwane mkhulu. Kokudlala nezilwane ungazithola sekuqala ukufudumala yakho futhi isimo for kokudlala nomunye. Plus kuyasiza ukuba adedele ukuthi hormone yonke ezibalulekile Oxytocin.
Ukugibela amahashi - Horse riding ngempela kube laugh, futhi inselele uma ungazange wazama it ngaphambi. Again nje hlola umlingani wakho uphezulu for the inselele ngaphambi uya njengoba akuwona wonke umuntu.
Art embukisweni - Uma nobabili art like lokhu kungenza ukuba nakho cultured and fabulous ngekuhlanganyela. Photo Imibukiso ingaba mnandi.
Top 10 Amacebiso Dating Successful